Mpanamboatra sy mpamatsy takelaka vita amin'ny takela-by China | Ruiyi
Ny tena asany dia ny anti-skid sy ny haingon-trano. Izy io dia manana fampiasana betsaka, ampiasaina amin'ny fanamboarana sy fitaterana. Ny takelaka vita amin'ny alimina vita amin'ny alimika dia an'ny andiana takela-bolafotsy madio. Araka ny fitsipika nomen'ny marika iraisam-pirenena, ny tahan'ny kalitaon'ny votoatin'ny alimina amin'ny makarakara aluminium haingon-trano dia mihoatra ny 99,5%. Noho ny fahadiovan'ny gratings aliminioma sy ny fizotran'ny famokarana somary tsotra, dia somary mora ny vidiny. Io no andiany ampiasaina matetika amin'ny indostrialy mahazatra. Ny karazana lamina mahazatra amin'ny kofehy alimina haingon-trano dia 1, 2, 3, ary 5. Rehefa miova ny fangatahan'ny tsena dia hisy karazana takelaka maodely hafa.
Ny vy matevina vita amin'ny alimina dia manondro ny hatevin'ny ravina aluminium ao mm eo anelanelan'ny 0.15 sy 2.0mm. Anisan'ireny, ravina aliminioma matevina 0,5 mm, ravina aluminium 1mm ary takelaka aluminium 2mm no refy takela-by aluminium malaza indrindra. Raha mandrefy ny hatevin'ny takelaka alimina amin'ny santimetatra ianao dia sahabo ho 1,5mm ny hatevin'ny takelaka aluminium, ary ity karazana ravina alu alu ity dia an'ny aluminium vita amin'ny manify ihany koa. Mikasika ny ravina alimina manify manify, ravina aluminium 12 metatra (2.0mm), ravina aliminioma 14 refy (1.6mm), ravina alimina 16 (1.3mm) ary ravina aliminioma 18 (1.2mm) dia ao anatin'io sokajy io avokoa.
Ity karazana ravina aluminium manify ity dia manana fampiharana marobe, indrindra amin'ny indostrian'ny haingon-trano. Fitaovan-jiro ho an'ny tranobe isan-karazany, ny tranonay, ny sekoly, ny hopitaly, ny toeram-pivarotana sns. Na amin'ny endrika ivelany na amin'ny faharetana, ny takelaka manify amin'ny alimo dia samy afaka manome fahafaham-po antsika. Ho fanampin'izany, ity metaly manify vita amin'ny alimina ity dia azo ampiasaina ho fitaratra taratra amin'ny masoandro, ary afaka mandray anjara betsaka amintsika amin'ny fitsitsiana angovo.
Fampiharana sy fiasa
Ny takela-by aluminium 5754 h114 dia mety tsara amin'ny fampiharana misy fepetra takiana avo lenta, toy ny sambo fitsangantsanganana goavambe, tilikambo rivotra anaty trano, gorodona / rindrina eo anelanelan'ny / mpandeha an-tongotra, tetezana mpandeha an-tongotra, tohatra fiakarana an'habakabaka, sehatra media, sns
1050 vatosoa vita amin'ny alim-bolan'ny alim-boaloboka vita amin'ny alim-baravarankely 6061 ho an'ny gorodona fitateram-bahoaka sy ny gorodona fidiovana ho an'ny daholobe
Kisary 5086 alim-by ho an'ny fitaterana mangatsiaka
Pedal aluminium 4017 dia be mpampiasa amin'ny firavaka haingo
Teo aloha: Takelaka aluminium 6061-T651
Manaraka: Cladding Composite Aluminium